I named this painting ‘Welcome to Karen State’. Both the exhibition and the painting have the same title. Most of us visit Shan State or upper parts of Myanmar. As I look across the entire country for landscapes to paint, I find Karen State is different. I’m an ethnic Karen, but I first visited Karen State only when I was 36 years old. In our country, people mostly paint the hills in Shan State or the landscapes in Anya (Upper Myanmar). In my opinion, the mountains in Karen State are unique. They’re like haystacks in an empty field – pointy and long. In this painting, I used matching colours fromacolour range. Previously, I didn’t dare use such colours. As I painted more, I learned that I could use unnatural colours too. I like Japanese artists and their style and philosophy when using colour. So eventually I learned how to express my artistic freedom.
These landscape paintings brought me some financial success. But I painted them for almostadecade. So I started another series entitled ‘Treeveller’ by combining tree and traveller. In the past decade, I tried abstract painting and started the Treeveller series. I felt happy and elated working on it. I also had many troubles and challenges, though. But I’m satisfied with this series.
The weather is different in 2020 from 2013. Some mountains I saw are no longer there. I know because I took photos whenever I visited. They probably demolished them for cement, lime and rock. So it’s become hotter. It’s not as beautiful as it was. I couldn’t say who did that. But I don’t want it to happen. Now I witness these issues myself, I’ve learned to love the environment. During my childhood, it was so cold in Insein in winter. We had to gather round the fire. Now there’s no cold anymore. So I want trees, mountains and forests to be preserved.
ဒီကားလေးကို နာမည်ပေးတာက Welcome to Karen State ဆိုပြီးပေးတာ။ ပွဲနာမည်ရော၊ ကားတွေကိုရော ဒီနာမည်ပေးထားတယ်။ ကျနော်တို့က ရောက်ဖူးတာ ရှမ်းပြည်လိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းပဲ ရောက်ဖူးကြတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှုခင်းရေးဖို့လိုက်ရှာတော့ ကရင်ပြည်နယ်ရောက်တော့ ထူးခြားတယ်။ ကျနော်က ကရင်ဆိုပေမယ့် အသက် ၃၆ လောက်မှ ကရင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ဖူးတာ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရေးနေကြတာက ရှမ်းပြည်က ကုန်းတွေ၊ အညာဒေသက ရှုခင်းတွေလောက်ပဲ ရေးကြတယ်။ ကျနော့် အမြင်မှာ ကရင်ပြည်နယ်က တောင်တွေက ထူးခြားတယ်လို့ ထင်တယ်။ လယ်ကွင်းပြင်မှာ ကောက်ရိုးပုံတွေ ပုံထားသလို တောင်ကြီးတွေက ချွန်ပြီး ထောင်တက်သွားကြတယ်။ ဒီပန်းချီကားမှာ ကာလာစဥ်နဲ့လိုက်အောင်ဆိုပြီး အရောင်တွေကို သုံးလိုက်တာပါ။ ကျနော်တို့ အရင်တုန်းကတော့ မသုံးရဲဘူး။ ရေးပါများတော့ သဘာဝမကျတဲ့ အရောင်တွေလည်းသုံးလို့ရပါလား သိလာတယ်။ ကျနော်က ဂျပန်ပန်းချီဆရာတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရေးနည်းရေးဟန်၊ အရောင်အယူအဆတွေကို ကြိုက်တော့ ငါတို့လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲသိလာတယ်။
ဒီ ရှုခင်းပုံတွေကလည်း ငွေရေးကြေးရေးအရ အနည်းအကျဥ်းအောင်မြင်တယ်ပြောရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု သွားထားပြီးပြီ။ နောက် Welcome to Karen State ပြီးတော့ နောက်စီးရီးတစ်ခုလုပ်သေးတယ်။ Treeveller ဆိုပြီး tree နဲ့ traveller ကိုပေါင်းထားတာ။ ဒီဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ Treeveller လည်း လုပ် abstract ပန်းချီတွေလည်း စမ်းသပ်လာတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာ ဒါကို လုပ်ရတာလည်း ပျော်ရ၊ ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရတာလည်း ရှိသလို ဒုက္ခအခက်အခဲတွေ ကြုံရတာတွေလည်း အများကြီးပေါ့။ ဒီစီးရီးကိုတော့ ကျနော်ကျေနပ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ကနေ ၂၀၂၀ အထိ ရာသီဥတုက မတူတော့ဘူး။ ကျနော်တို့တွေ့တဲ့ တချို့တောင်တွေက မရှိတော့ဘူး။ သွားတိုင်း ဓာတ်ပုံနဲ့ မှတ်တမ်းတင်လို့သာ သိရတာ။ ဘိလပ်မြေတွေ၊ ထုံးတွေ၊ ကျောက်တွေ အတွက် ဖြိုကြတာထင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ပိုပူလာတယ်။ ထင်သလောက် မလှတော့ဘူးပေါ့။ ဘယ်သူလုပ်လဲတော့ အတိအကျတော့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေကို မဖြစ်စေချင်ဘူး။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်တတ်လာတယ်။ ကျနော်နေတဲ့ အင်းစိန်မှာဆို ငယ်ငယ်တုန်းက ဆောင်းရာသီဆို အေးစိမ့်ပြီး မီးတွေ လှုံရတဲ့ အဆင့်ပေါ့။ အခုအဲ့ဒါတွေ မရှိတော့ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် သစ်ပင်တွေ တောတောင်တွေကို ထိန်းသိမ်းစေချင်တယ်။